Koonfur Afrika, codka dib u celinta taageerayaasha ANC - TELES RELAY
ACCUEIL » International Koonfur Afrika, taageerada dib-u-celinta ee taageerayaasha ANC
Koonfur Afrika, taageerada dib-u-celinta ee taageerayaasha ANC
In magaalada Alexandra inta lagu guda jiro shirka Madaxweynaha Koofur Afrika Cyril Ramaphosa, 11 April 2019, ololaha doorashada ee May 8. Sumaya Hisham / REUTERS
"Tan iyo 1994 waxaan ugu codeeynay Nelson Mandela, Thabo Mbeki iyo Jacob Zuma, laakiin wax isbeddel ma jirin. Waa inaad timaadaa gurigayga, waad arki doontaa waxa aan taageerno iyo inta aan ku xanuunsano »nuucyo, dilal, Aubrey Kutlawano.
Ku dhowaad garoonka dhexdiisa, garoonka magaalada Alexandra, ee ku yaala bartamaha magaalada Johannesburg, ayaa isbitaal loo duubay isha, 11 April. Qodobbadii ugu dambeeyay ee uu hadalku ku dhamaatay, Madaxweynaha Koofur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa kala qaybiyay dad badan oo ku hareereysan ilaaliyihiisa, waxaana lagu ordi jiray limousine.
Sidoo kale akhri Koonfur Afrika: Musuqmaasuqa, Shaqooyinka iyo Dhulka Barnaamijka Doorashooyinka 8 May
irdaha u dhow, kids yihiin gurguurato si aad u hesho ereydaas la madow, jaalle ah oo cagaaran iyo National Congress Afrika (ANC), kuwaas oo madaxda guulaystaan ​​keentay dalka tan iyo dayrta ee midab jiro a qarnigii quarter.
Sanadihii 42, Aubrey Kutlawano ayaa ku dhameysatay ANC. "Dadka oo kaliya ayaa dhiirrigeliyay faa'iidada faa'iido u leh iyaga oo u shaqeeya iyaga kaligoodayuu fumed. Waqtigaan ma codayn doono. "
Wixii todobaad, Cyril Ramaphosa bootin forums shirarka guud ahaan dalka Koonfur Africa si ay isugu dayaan inay ka dhaadhiciyaan inuu 27 milyan oo cod-in ay mar kale ku siin codkooda si uu xisbiga ee doorashooyinka guud ee 8 May
"Den ee denbiilayaasha"
Dhammaan ra'yiururinta ayaa weli saadaalisay aqlabiyad buuxda. Laakiin dhulka ku yaala, isbahaysigii hore ee ku dhowaa Nelson Mandela wuxuu kufahmayaa inuu soo koobo niyadjabka, xitaa cadhada dadka raacsan.
Gaar ahaan Alexandra. Iyada oo hoos imanaysa muraayadda quraaradaha ah iyo murtiyada birta ee degmada Ganacsiga ee Sandton, magaaladu waxay noqon kartaa guriga ANC ee guuldarada.
Bulaacadahooda iyo furan booso, buulalka hawadu Saanqaag Fidlo ah jiingado bir ah, waddooyinka jabay ... Inta badan dadka 200 000 ku nooshahay, ama halkii ay u noolaadaan, koronto jirin, biyo lahayn iyo shaqo la'aan.
Qodobka loo qoondeeyey macaamiisheena Sidoo kale akhri Koonfur Afrika: dhulka cagaaran, rajo madow
"Qof walba wuu ka cabanayaa in Alex uu yahay meel loo hayo dambiilayaasha. Laakiin sababtoo ah dadka ma shaqeeyaan "iyaga oo ka mid ah iyaga, Kgomotso Mosepidi.
"Waa inaan u duulnaa si aan u noolaano"wuxuu sharxayaa aabaha siddeedaad, oo ah qalinjebiye kombuyuutar oo shaqeeya mudo shan sano ah.
Halkan, qofka ajnebiga ah ayaa ah nambar loo qoondeeyey.
"Waxay ka yimaadaan dalkooda, helaan guryo oo waxba kama bixiyaan. Aniga, muwaadin Koonfur Afrika ah, waa inaan bixiyaa kiradeyda, biyo iyo korontokeygaNina Zweni, oo ah hooyo shaqeynaysa 44. Dawladu wax annaga nama yeelin, waxay joogaan oo kaliya si ay u soo kabtaan codadeena. "
Xitaa caro, waxay qirtay in ay wali u codeeyn doonto ANC. "Tani waa dhaqdhaqaaqa xoraynta, waxay naga dhigeen lacag la'aan. Ka dibna Cyril wuxuu ina siinayaa sababo rajo leh, ayay tiri. Shaydaan baa ka sii fiican waxaynu og nahay. "
Tani waa khilaafka doorashadan. In kasta oo ay jirto fadeexado musuqmaasuq, inkastoo shaqo la'aanta, haddana ANC waxay sii wadaa kalsoonida dadka badankooda.
Qodobka loo qoondeeyey macaamiisheena Sidoo kale akhri Koonfurta Afrika, "xitaa baadari, waanu khiyaanayn lahaa"
300 oo koonfur ka xigta Alexandra, Madaxa Dawladu wuxuu leeyahay rajo isku mid ah mustaqbal wanaagsan.
Maalintaas, dadka deggan tuulada Thabong, ee ku yaalla magaalada macdanta ah ee Welkom, waxay u ordaan goob ay ku yaalaan sida dhoobo sida jidadkooda ay ugu salaamayaan madaxda ANC.
Cabashooyinkoodu way badan yihiin. "Tan iyo markii aan ku jirnay dimuqraadiyad, waxbaa isbedelay, xayeysiiyey Mphasa, 54 sano oo shaqo la'aan ah sagaal sano. Waxaan weli ku noolahay xeryaha, waxaan wali u dagaalameynaa helitaanka adeegyada aasaasiga ah. "
Laakiin wuxuu sidoo kale go'aansaday in uu siiyo xisbiga Nelson Mandela dabayaaqada kale. "Laakiin tani waa markii u dambeysay, Waxa uu sheegay. Haddii uusan haysan balanqaadyadiisa, waan aadi doonaa meelo kale. "
"Mas'uuliyadda dadka kale"
Welkom iyo Johannesburg ayaa ka niyadjabay, madaxwaynaha ayaa ballanqaaday guryaha cusub, kiniinada carruurtooda iyo "Nolol fiican".
"Waa in aan ka jawaabnaa xanuunka iyo dhibaatada dadkeena"Wuxuu u sheegay, in uu xoojiyo khudbadiisa"Amandla! " ("Awooda! ") waxay kor u qaadeen koox dad ah sidii wakhtigii halganka kacaanka.
Alexandra, Cyril Ramaphosa ma caawin kari karno, laakiin duqa magaalada caasimada ah ee Johannesburg, oo ah magaalada ugu weyn ee dalka.
Cyril Ramaphosa oo booqasho ku tagay magaalada Khayelitsha ee ku dhow Cape Town, 27 Febraayo 2019. Sumaya Hisham / REUTERS
"Dawladda hoose waxay u qalantaa in ay xalliso dhibaatooyinkaaga, laakiin duqa magaaladaada ayaa ka cabsanaya in uu halkan yimaadowuu qosliyay. Waa waqtigii lagu dooran lahaa ANC! "
Wax kasta oo laga helo sababaha xisbiga, dadku waxay ku faraxsan yihiin oo dhan. Marka laga reebo ixtiraamka Nethanani.
Sidoo kale akhri Qaybta miyiga ee hoos yimaada midab-takoorka
"Waxay isku dayaan inay dadka kale ku eedeeyaan xaalada, laakiin waxay ku jireen awood ay leeyihiin shan iyo labaatan sannadoodwuxuu ku cadeeyaa ninkan shaqo la'aanta, mid kale, 34 sano jir ah. Anigu ma garanayo cidda u codeeyneysa, lakiin dhab ahaantii ANC. "
"Cyril waa nin fiicanIsbahaysiga Jacob Mpho, ayaa lagu eedeeyay inuu yahay xisbi aan la dafiri karin. Anigu waxaan u codeyn doonaa ANC sababtoo ah waxaan ku kalsoonahay. Laakiin maalin kasta waan qayliyaa. "
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/04/16/en-afrique-du-sud-le-vote-a-reculons-des-partisans-de-l-anc_5450872_3212.html?xtmc=afrique&xtcr=1